Ny fampiharana Apple TV + dia azo alaina ho an'ny Nvidia Shield TV ary mifanaraka amin'ny mpanampy Google | Avy amin'ny mac aho
Apple dia manohy manitatra ny isan'ny fitaovana ahafahanao mankafy ny Apple TV +, ny farany dia ny Nvidia Shield TV, boaty ambony iray miorina amin'ny Android izay efa mamela anao hankafy ny serivisy horonantsary streaming an'i Apple. Amin'izao fotoana izao dia mbola tsy manana an'io safidy io ny fitaovana Android.
Ny fampiharana, azo alaina amin'ny Play Store, mamela antsika hankafy ny atiny rehetra misy amin'ny Apple TV + amin'ny kalitao 4K HDR. Izy io koa dia mifanaraka amin'ny Dolby Vision sy Dolby Atmos, noho izany dia ho azontsika atao koa ny mankafy ny kalitaon'ny horonan-tsary sy feo avo indrindra na dia tsy Apple TV 4K aza.
Ny fampiharana Apple TV dia mamela ny tompona fahitalavitra Nvidia Shield handefa ny sarimihetsika na fandaharana amin'ny fahitalavitra azo alaina ao amin'ny fampiharana, toa ny ataon'izy ireo amin'ny fitaovana Apple.
Ho fanampin'izany, mamela antsika hifehezana ny playback sy ny fidirana amin'ny atiny mivantana amin'ny alàlan'ny mpanampy Google, fiasa tsy misy tanana izay tsy isalasalana fa hankasitrahan'ny mpampiasa maro.
Ny fampiharana Apple TV ao amin'ny Nvidia Shield TV + dia manome fidirana tsy ny tranombokinao manokana momba ny atiny novidiana avy amin'ny iTunes Store ihany, fa koa amin'ny zavatra rehetra azo alaina amin'ny famandrihana Apple TV + anao, ao anatin'izany ny andiany malaza toy ny "Ted Lasso," " The Morning Show, "" For All Mankind, "ary" Servant ", miampy sarimihetsika toy ny" Greyhound, "" Palmer, "" Wolfwalkers, "sy maro hafa.
Ankoatr'izay, any amin'ny firenena misy azy io dia afaka miditra amin'ny serivisy horonantsary ankolafy toa ny AMC +, Paramount + na avy amin'ny rindranasa napetraka ao amin'ilay fitaovana ihany koa izahay. Farany, ny rindrambaiko dia manohana tolo-kevitra ho anao manokana mifototra amin'ny tantaram-piainanao.
Na dia misy aza ao amin'ny Play Store, ny fampiharana dia tsy misy amin'ny fitaovana Android, ho an'ny maodely TV tantanan'ny Android TV ihany ary ankehitriny ny isan-karazany an'ny Nvidia Shield TV.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny fampiharana Apple TV + dia azo alaina amin'ny Nvidia Shield TV ankehitriny ary mifanaraka amin'ny Google Assistant